Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 499378 times)
« Reply #740 on: November 13, 2011, 02:24:35 AM »
« Reply #741 on: November 13, 2011, 12:43:52 PM »
စူးရှလွန်းလှသော အသံကြောင့် ကျွန်တော် လန့်နိုးလာခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်က ဒီလေယာဉ်က ဘယ်ကိုသွားမှာလဲလို့ တရုတ်လိုမေးလိုက်တော့ သူက အမေရိကားကို သွားနေတာလို့ ရုရှလိုပြန်ပြောနေတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ မုန့်စိမ်းပေါင်းတစ်ထုပ်နဲ့ မကျည်းဖျော်ရည်တစ်ခွက် ကျွန်တော့်ရှေ့ကို လာချတာတွေ့လို့ ကြည့်လိုက်တော့ J-Lo ဖြစ်နေတယ်။
သူက လိုတာရှိရင် မှာပါလို့ မြန်မာလို့လည်း ပြောလိုက်သေးတယ်။
ကျွန်တော်လည်း စားမလို့ ဇွန်းနဲ့ ခရင်းကို ကိုင်ကာရှိသေးတယ် လေယာဉ်က သင်္ဘောဆိပ်ကမ်းကို လာကပ်တယ်။
လေယာဉ်ပေါ်က ဆင်းတော့ အမေရိကားလေဆိပ်မှာ ဆာရီခြုံထားတဲ့ ကုလားမလေးတွေ အများကြီး လာကြိုနေတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ကော်ဇောနီကြီးပေါ်မှာ ဖြတ်လျှောက်ရင်း အားလုံးကို လက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီး ထွက်လာခဲ့တယ်။
လေဆိပ်က ထွက်တော့ ကားမှတ်တိုင်မှာ ဘတ်စ်ကားတစ်စီးကို အဆင်သင့်တွေ့တာနဲ့ အမြန်ပြေးတက်ပြီး လိုက်သွားတယ်။
ကျပ်လိုက်တဲ့ကားဗျာ..။ ခြေချစရာတောင် နေရာမရှိဘူး။
သွားနေတဲ့ လမ်းကလည်း ဆိုးမှဆိုး ။ မုန့်လင်မယားအိုးက အဘားအဘား ခေါ်လောက်တယ်။
စပယ်ယာကလည်း ဆိုးလိုက်တဲ့ အပေါက်။
ကားပေါ်က လှမ်းကြည့်တော့ ပီဇာဆိုင် တစ်ဆိုင်ကိုတွေ့တာနဲ့ ကားပေါ်ကနေ အတင်းတိုးဆင်းမိတယ်။ ဗိုက်ကလည်း ဆာလာသလိုလိုဆိုတော့လေ။
ကားပေါ်ကဆင်းပြီးတော့ ဒီလောက်ကျပ်တဲ့ကား ဘာကားပါလိမ့်လို့ သိချင်တာနဲ့ကားကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်။
မထသ ၃၉ ။ ကျွန်တော် စိတ်ဓါတ်ကျသွားတယ်။
ဆိုင်ရှင်က ငြီးငြူနေတယ်။ ဆိုင်ရောင်းရတာ အလုပ်မဖြစ်ကြောင်း။ ဘာအခွန် ညာအခွန် နဲ့ လာလာကောက်တာတွေ များနေကြောင်း။
အရင်တုန်းက အမေရိကားနဲ့ မတူကြောင်း။
သူ့သားနှစ်ယောက်ကိုတောင် ခု အရမ်းတိုးတက်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို လွတ်ဖို့ စဉ်းစားနေကြောင်း။
ခုနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံကို သွားဖို့ မလွယ်ကြောင်း။ အေးဂျင့်တွေကလည်း စိတ်မချရကြောင်း။ အမေရိကားမှာ ရတဲ့ ၀င်ငွေနဲ့ မိသားစု စားလို့မလောက်ကြောင်း။
ခုနောက်ပိုင်း အမေရိကက လူငယ်တော်တော်များများလည်း မြန်မာနိုင်ငံကို အထွက်များကြောင်း အများကြီးပြောပြနေတယ်။
ကျွန်တော်လည်း သူပြောတာကို အီကြာကွေးနဲ့ လက်ဖက်ရည်ကျဆိမ့် တစ်ခွက်သောက်ရင်း နားထောင်နေလိုက်တယ်။
အနောက်မှာ နေတိုးတပ်ဖွဲ့တွေက အတင်း လိုက်နေကြတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ဘာမှန်းမသိပဲ မေတ္တာသုတ်ကို ရွတ်နေမိတုန်း စစ်သားတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကိုဂုတ်ကနေ လာဆွဲခေါ်သွားတယ်။
နောက် ကျွန်တော်ကို အိုဘားမားနဲ့ တွေ့ခိုင်းတယ်။
အိုဘားမားက မာမူသတင်းထောက်ကြီးကို လမ်းမလည်ကောင်မှာ သေနတ်နဲ့ ပစ်တာ ကျွန်တော်ပါလို့ စွပ်စွဲတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ရပ်ကွက်ကပေးတဲ့ ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံစာကို ပြလိုက်တော့ ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်။
ဆက်သွားရင်းနဲ့ ဟိုတယ်တစ်ခုရှေ့ရောက်တော့ အနားယူချင်စိတ် ဖြစ်လာတာနဲ့ ဟိုတယ်ပေါ်ကိုတက်တော့ မီးက ပြတ်သွားတယ်။
ဟိုတယ်က ကုလားလေးတွေကို မေးကြည့်တော့ အမေရိကားမှာ ခု မီးက အလှည့်ကျလာနေတယ်လို့ပြောတယ် ဒီနေ့က မီးပြတ်ရက်တဲ့။
ကျွန်တော်လည်း အမေရိကားမှာ ဒီလောက်ဆိုးရွားနေတာ မနေချင်တော့တာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ဖို့ ပတ်စပို့သွားလုပ်တယ်။
တိုးလိုက်ရတာဗျာ။ စောင့်ရတာလည်း ပြောမနေနဲ့တော့။
ဒါနဲ့ စိတ်ပြေလက်ပျောက်ဆိုပြီး IC ရှိုးသွားကြည့်တယ်။
စင်ပေါ်မှာ ဆိုနေသူက ပိုးအိစံ ။ သူက `အချစ်ဆိုတာ ရယူခြင်းမှ မဟုတ်ပဲ မဏိစန္ဒာ ´လို့ ဆိုနေတုန်းမှာပဲ
မျိုးကြီးက စင်ပေါ်တက်လာပြီး `ရယူခြင်းမဟုတ်ရင် အချစ်က ဘာလဲ´ ဆိုပြီး တက်ဆိုပြီးတော့
ထချကြတာ နောက်ဆုံးတော့ ဒွေးရယ် သုမောင်ရယ် စိုင်းထီးဆိုင်ရယ် ဇော်ဝမ်းရယ် လွှမ်းမိုး ပါသေကုန်တယ။်
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ပတ်စပို့ရုံးကို ပြန်သွားပြီး တာဝန်ရှိသူတွေကို စာအိတ်လေးပေးလိုက်တာ ပတ်စပို့တန်းရတာပဲ။
ပြန်ရတော့မယ်ဆိုတော့ ရင်ခုန်စရာခြေထောက်များနဲ့ ကိုရီးယားအဆိုတော်မလေးတွေအဖွဲ့ ဝမ်းဒါးဂယ်လ်မလေးတွေ သွားနှုတ်ဆက်တော့ ဖက်ဖက်ပြီး ငိုလိုက်ကြတာပြောမနေနဲ့တော့။
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်းအားလုံးကို နှစ်သိမ့်ရင်း ပုခုံးလေးတွေကို ကိုင်ပြီး ပါးလေးတွေကို နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ ကပ်လိုက်တုန်း….
ကြောင်က ဗီဒိုပေါ်ကနေ ခုန်ချလိုက်ခြင်းပင်။
ဆောင်းတွင်းအိပ်မက် ကယောက်ကယက်ဆိုတဲ့ အတိုင်းပဲ။ ဘာတွေ မက်နေမှန်းလဲမသိ။
အစီအစဉ်လည်း မကျ။ အိမ်ကကြောင်ကိုတော့ တော်တော် စိတ်ဆိုးသွားခဲ့တယ်ဗျ…။
ဘယ့်နှယ် … ကောင်းခန်းရောက်မှဗျာ။
« Reply #742 on: November 15, 2011, 10:51:31 AM »
ကိုပေါတစ်ယောက်ရှူးရှူးရှဲရှဲမြည်ကာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲသို့ ဝင်လာသည်..။ ပါးစပ်မှလည်း "ငါ့ကိုများနွားမှတ်နေလား" ဟုရေရွက်လျက်...။ အပေါင်းအသင်းများက မေး၏..။ ကိုပေါက အောက်ပါအတိုင်းရှင်းပြ၏..။
« Reply #743 on: November 15, 2011, 05:18:02 PM »
( ဒူဟူ ဟူ)
ရွှေတွင်း ငွေတွင်း ပယင်းဒုဋ္ဌာ ရတနာ(၇)ပါး၊ ဖားတွင်း မြွေတွင်း ငါးရှဉ့်တွင်းတို့၏အရှင်၊
အရိန္ဒမာ လှံစကြာ၊ သီလ၀ံသ ဓားစကြာ၊ ဆယ်ပြားဖိုး သုံးလိပ် ဆေးလိပ်စကြာ၊ ကလေးတွေကစားတဲ့ တစ်ခုဆယ်ပြား စက္ကူစကြာ၊ စကြာရတနာပေါင်းစုံရ
သာမုန်ထီး၊ ပဒုမ္မာထီး၊ ကနက္ကဒါန်ထီး၊ ခေါက်ထီ၊း ဖဲထီး၊ ထီးပြင်ကုလားထီး၊ ချာလီထီ၊း ထီးတစ်ရာ ပဏာတော် လျှိုးပါသည့် သတိုး သီရိ (သွပ်သွပ် ဘုရင်) အမိန့်တော်မှတ်လိုက်သည်
ဤအမိန့်တော်ကို မြင့်ရာမှ နိမ့်ရာသို့ ဆင်း၍ နာခံကြ ၊ လမ်းဘေးကလူများ မြောင်းထဲ ဆင်းကြ၊
(သွပ်သွပ်ဘုရင်) ရာဇမာန်ရှလျှင် ပုလင်းကွဲ ရှတာထက် နာသွားလိမ့်မည် ၊ အမိန့်တော် --
« Reply #744 on: November 17, 2011, 01:14:34 PM »
« Reply #745 on: November 19, 2011, 08:41:55 AM »
ဒါလဲ မေလ်းထဲ ကပဲ
ဒီတစ်ပုဒ်က "အကြောင်းရင်း" လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားပြီး ၂ဝဝ၉ ဧပြီလထုတ် အမှတ်(၇၈) ဖြစ်ရပ်မှန် စုံထောက်မဂ္ဂဇင်းက ဖတ်ရတာလေးပါ။ ကျွန်မတစ်ယောက်ထဲ ရယ်ရတာ အားမရလို့ အားလုံးဝိုင်ရယ်နိုင်ဖို့ မဂ္ဂဇင်းကတစ်ဆင့် ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
« Reply #746 on: November 19, 2011, 01:11:27 PM »
"ယောက်ျားတွေ အမှားကြီးမှားပြီဆိုရင် အသက်တစ်ချောင်း ဆုံးရှုံးရတဲ့ အထိဖြစ်သွားတတ်တယ်"
"မိန်းမတွေ အမှားကြီးမှားပြီဆိုရင်တော့ အသက်တစ်ချောင်းကို မွေးထုတ်ပေးရတတ်တယ် ဗျ"
၁နေ့လိုင်းကားစီးနေစဉ် အသက်၄၉ နှစ်အရွယ်ဦးလေးကြီးဘေးနားတွင် ကလေးအားရင်တွင် ပိုက်ထားသော ၂၉ နှစ်အရွယ် ရှိ မိန်းကလေးတို့ ၁ခုံတည်းတွင်ထိုင်နေကြသည်.
ကလေး က အော်ငိုတိုင်း မိန်းကလေးက ကလေးအားနို့တိုက်မည် ဟု ဆိုပြီး ပြင်နေတုန်းကလေးက မသောက်ချင်ဘူးဆိုတဲ့အမူအရာလုပ်ပြပါတယ်
ဒါနဲ့ မိခင်က ပြောပါတယ် နင်မသောက်ရင် ဘေးနားက ဦးလေးကြီးကို တိုက်လိုက်မှာနော် ဆိုပြီးပြောပါတယ် ..
ဒီလိုမျိုး အခေါက် ၁၀ လောက်ရောက်ဘေးနားကဦးလေးကြီးက ပြောပါတယ်
"ဒီမှာ မိန်းခလေး ကလေးကို မြန်မြန်ဆုံးဖြတ်ခိုင်းမှာ ကားက ဂိတ်ဆုံးတော့မယ်
တော်ကြာ ငါမသောက်ရပဲ ကားပေါ်က ဆင်းရတော့မယ်.."
« Last Edit: November 21, 2011, 09:40:12 AM by tunaye2011 »
« Reply #747 on: November 20, 2011, 10:11:06 PM »
အချစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူပျိုကြီးများအတွက်ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်း နှစ်ခု ...
« Reply #748 on: November 21, 2011, 05:31:33 PM »
အိုင်ဖုန်း နဲ့ ကျောက်တုန်း
« Reply #749 on: November 23, 2011, 02:26:38 PM »